वाल्मीकि आश्रमको संरक्षणमा सहयोग जुट्दै | चितवन पोष्ट दैनिक
वाल्मीकि आश्रमको संरक्षणमा सहयोग जुट्दै
२०७० माघ ६, सोमबार ०३:०६ गते
वाल्मीकि आश्रम । वाल्मीकि आश्रमको विकासका लागि सहयोग जुट्न सुरू भएको छ । गुरूयोजनाअनुसार आश्रम क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको विकासका लागि १० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आश्रम संरक्षण र प्रचारका लागि चितवन प्रशासनले सक्रियता बढाउन थालेको छ । प्रशासनको सक्रियतासँगै सहयोग जुट्न लागेको हो ।
आश्रम परिसरमा शनिबार सम्पन्न गुरूयोजनाको समीक्षा कार्यक्रममा भौतिक निर्माणका लागि सहयोग गर्नेहरु पनि निस्किएका हुन् । पाल्पाका समाजसेवी लक्ष्मी ज्ञवालीले स्नानगृहलगायतका संरचनाका लागि ११ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने वचन दिए । त्यस्तै चितवनकी समाजसेवी मैयादेवी श्रेष्ठले पाँच लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरिन् ।
सरकारले तत्कालका लागि तीन लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । ‘गुरूयोजनाअनुरूपको निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रका सभासद विक्रम पाण्डे पनि इच्छुक देखिनु भएको छ । निर्माण र विकासका लागि उहाँलाई पनि अनुरोध गर्ने छौँ’ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले भने ।
भौगोलिक रूपमा चितवन माडीको गर्दी गाविस वडा नं. ९ मा पर्ने वाल्मीकि आश्रममा पुग्न सदरमुकाम भरतपुरबाट ९० किलो मिटर नवलपरासी जिल्लाको भूभाग र सात किलो मिटर भारतीय भूमि पार गर्नुपर्छ । सहज रूपमा जान आउन नसकिने भएकाले यसअघि चितवन प्रशासनले यस क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त चासो दिएको थिएन ।
नारायणी, तमसा र सोनाहा नदीको आडमा रहेको यो ठाउँमा रामायणका लेखक वालल्मीकि ऋषिको निवास रहेको जनविश्वास छ । यहाँ सीता माताको पनि अन्तिम समयहरु बितेका थिए । रामले त्यागेपछि उनका भाइ लक्ष्मणले सीतालाई यही ठाउँमा ल्याएर छाडेका थिए । सीताले यहीबाट पाताल प्रवेश गरेको जनविश्वास छ । रामयणकालीन कथनहरुसँग जोडिएको स्थान भएकाले भारत नेपालका भक्तहरु यस ठाउँमा आउने गर्छन् ।
नदी र जंगलको आडमा रहेको यो ठाउँ पुग्न सहज भने छैन । आश्रम वरपर खानेपानी, बिजुली र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरु पनि छैनन् । ‘बाटो घाटो बिजुली पानी र आएर बस्ने सत्तलहरुको अभाव देखिएपछि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न हामी जुटेका छौँ’ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले भने ।
चितवन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जगदिश शर्माका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विसं. २०५९ सालमा आश्रमको गुरूयोजना तयार गरेको थियो । गुरूयोजनाअनुसार त्यहाँको विकासका लागि १० करोड रूपैयाँका योजनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘हवन कुण्ड, म्यूजियम, प्रवचन कुण्डजस्ता १८ वटा संरचना र बगैँचा, आँगनजस्ता भू व्यवस्थापनका लागि १० करोड रूपैयाँको लागतमा योजनाहरु बनेका छन् । दुई वर्षअघि यो अनुमानित लागत तय भएको हो’ प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख शर्माले भने । गुरूयोजनाले सो ठाउँमा आठवटा पुरातात्विक क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ । पुरातात्विक स्थलको थप उत्खनन्का लागि पुरातत्व विभागलाई अनुरोध गरेको प्रजिअ शर्माले बताए ।
आश्रम वरपरको पुरातात्विक स्थलहरुमा सीता पाताल प्रवेश स्थल, अमृत कुण्ड, हवन कुण्ड, राम सीताका छोरा लव र कुशले घोडा बाँधेको खम्बा, लव कुशको पाठशाला, विष्णु चक्र, सीताको फलफुल बगैंचा र वाल्मीकि ऋषि अन्तरध्यान भएका स्थलहरु रहेका छन् । यी पुरातात्विक स्थलसँग धार्मिक आस्था जोडिएकाले राम्रो प्रचार प्रसार भएमा देश विदेशका भक्तजनहरु आकर्षित हुने देखिएको छ ।
भारतको बाटो प्रयोग नगरी नेपालबाटै सहज रूपमा आश्रम पुग्नका लागि त्रिवेणीबाट नारायणी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल बनाउन लागिएको छ । चार करोड रूपैयाँको लागतमा बन्ने सो पुलेको निर्माण सुरू भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताए । चितवन निकुञ्जको क्षेत्रभित्र आश्रम रहेको छ । आश्रमका विकासका लागि वातावरणमैत्री योजना ल्याउन निकुञ्ज सकारात्मक देखिएको छ ।
‘वातावरणसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु पालना गरेर पुल बन्नुपर्छ । हामी अन्य भौतिक विकासका लागि पनि तयार छौँ । तर ती निकुञ्जको वातावरण अनुकूलका हुनुपर्छ’ चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले भने । भूमिगत रूपमा तार बिछ्याएर बिजुली लैजान निकुञ्जले स्वीकृति दिएको छ । पुल बनेमा बाटो पनि बनाउन दिने कुँवरले जानकारी दिए ।
[divider]फोटो क्याप्सनः वाल्मीकि आश्रम क्षेत्रमा रहेको यो पत्थरलाई सीता माताको सिलौटो भनिन्छ ।